>Watercolour | ချမ်းလင်းနေ
Filed under: ကဗျာလေးတွေ —9Comments
သမားရိုးကျ ကမ္ဘာကြီးဆိုရင်ကော ?
>ဒီကဗျာလေးကို ငါးခေါက်လောက်ကို ထပ်ထပ်ဖတ်မိတယ်ဗျာ … ဖြစ်ပျက်နေတာတွေ ရှင်းပြပြီး အဓိပာယ် ရှိတဲ. ဖွင်ဆိုချက်တွေ မေးသွားပြီးနောက်ဆုံး ဘာမှ မရှိ ဘာမှ မေးမရတော.တာအခါအရာရာ ဟာ ကွယ်ပျောက်သွားမှာလား ဆိုတာတကယ်တော. တစ်ထောင်.တည ပုံပြင်လိုပါဘဲဗျာကဗျာဖတ်ပြီး နောက်ဆုံးမှာ စဉ်းစား စရာကိုနက်နက်နဲနဲ ပေးပြီး အဆုံးသတ်ထားတယ် … အကိုမေးထားတာ တွေက တကယ်. နက်နဲ ခြင်း ပုစ္စာ နောက်က ဖြေရှင်းဖို.မရှိတဲ. အဘိဓာန်ပေမဲ. ကိုလိုရာဖြေကြမယ်ဆိုလည်း မမှားဘူးလို.ဘဲ ပြောရတော.မယ်အကိုရေတကယ်ကို ရေဆေး ပီသတယ်ဗျာ…အများကြီးကို တွေးမိသွားစေပါတယ် ဗျာ… အားပေးလျက်…
>အရမ်း ကောင်းတယ် ဆက်ကြိုးစားနော်ထာဝရပွင့်ဖြူ
>တွေးစရာတွေ အများကြီးသယ်သွားပြီ။တန်ဖိုးရှိတဲ့ ကဗျာလေးအတွက် ကိုချမ်းရေ ကျေးဇူးကမ္ဘာ။
>အသက်ရှင်သန်မှုအတွက်ဘဝဆိုတာအနှစ်သာရတစ်ခုလား။ရှင်သန်ခြင်းတစ်ခုလား။အာဟာရတစ်ခုလား။ဖန်ဆင်းခြင်းတစ်ခုလား။ကဗျာကောင်းလေးတစ်ပုဒ်ပါ။ အဓိပ္ပါယ်အများကြီးရှိပါတယ်။ ခံစားပြီးတော့ ဖတ်သွားပါတယ်နော်။
>ရေဆေးကာလာတဲ့လား အကိုရေဆေးက ရေစီးကြောင်းအလိုက် စီးသွားသလိုမျိုးဒီကဗျာလေးကလဲ စိတ်ကူးသလောက် တွေးတောမိသွားတယ်ကဗျာကောင်းလေးနဲ့အတူ တွေးတောမှုလေးတွေပါ သယ်သွားပါတယ်ဗျို့နေ့ခင်းကတင် အဲ့ဒီ ငြိမ်ငြိမ်လေးတွေးနေမိတဲ့ အကြောင်းကို စာတပုဒ်ရေးဖြစ်သေးတယ် အခုတလော အတွေးတွေတူနေကြတယ် ထင်ရဲ့ 😛
>မိုက်တယ်ဗျာ။ကဗျာလေးရော ပန်းချီလေးရော။ အတော်ကို မိုက်တာ။ လန်းတယ်ဗျာ။
>ကဗျာလေးတွေကို ပုံလေးတွေနဲ့ တွဲတွဲပြီး ရေးလေ့ရှိတဲ့ ကိုချမ်း…ဒီဇိုင်း ကလည်း လန်း..ကဗျာ ကလည်း လန်း…မပွင့် လိုပဲ မန့်တော့မယ်အရမ်းကောင်းတယ် ဆက်ကြိုးစားနော်…ထာဝရကြယ်ဖြူဟဲ..ဟဲ..ပျော်ပါစေခင်ဗျကွန်ပျူတာနဲ့ ပတ်သက်လို့ နားပူနားဆာ လုပ်တိုင်း စိတ်ရှည်ရှည် ကူညီတဲ့မိတ်ဆွေ IT ဆရာကို အထူးကျေးဇူးနော…နောက်လည်း လုပ်ဦးမယ်..း )
>ဗလာနတ္ထိနဲ့ ဘာကိုမှမရနိုင်တော့ဘူး ဆိုရင်ကော?တိတ်တိတ်လေးတွေးဆိတ်ဆိတ်လေးဆွေးအေးအေးလေးငေးပြီးအမှောင်ကွယ်ရာချောင်တချောင်မှာတိုးတိုးလေးနဲ့ ငုပ်လျှိုးပြောက်ကွယ်သွားတော့မယ်။။။ကိုချမ်းရေ အဲဒီစာသားလေးကို ကြိုက်တယ်…ကဗျာလေးကလဲ အနှစ်ရှိတယ်…ကိုချမ်းအတွေးလေးတွေကလဲ အရမ်းလန်းတယ်..နှင်း
« >မောင်ရေချမ်း၏ အတွေးပုံရိပ်